Izay afaka hihaona Sinoa vavy ao Tianhe any Guangzhou (China). Video Mampiaraka
Ianao dia tsaratsara kokoa ny handeha ny sasany mpandeha an-tongotra-pivarotana sy fotsiny mandeha an-tongotra manodidina ny mitsiky sy mankafy ny tenanao. Tsara eo amin’ny masony, ka jereo izay mihazona azy, ary nitsiky indray, dia mandehana miakatra ny hoe any halo sy miasa ny majika. Ao amin’ny trano fisakafoanana, ny olona lehibe mipetraka ny sakafo buffets lavitra ny tsara indrindra, vao mandeha manodidina nanamarina ny hafahafa ny sakafo sy ny conveniently hiafara manaraka ny sasany ankizivavy mahafatifaty eo anoloan ny bibilava fiara mifono vy, na manerana ny Xiao ixia sy mitsiky izy, ary miteny ao halo, ny loza Jiao X. aho raha vao nahita ity tovovavy mahafatifaty mihantona avy eo ny fandraisana ity firenena club trano fandraisam-bahiny izay nijanona aho, koa rehefa nahita azy handao ny lehibeny s side mandeha any amin’ny efitra fandroana, dia fikatsahana izany, ka dia mety bump ho azy ny avy amin’ny fahitana ny trano fivoahana varavarana. Izany, dia nihazakazaka vazivazy tao amin ny birao taloha sy ny olona sasany dia tena mandray ny filokana ny amin’ny fomba maro isa finday aho tonga eo isa-maraina miaraka amin’ny ho avy amin’ny roa ry zalahy ny alina talohan’ny. Ny zavatra mampihomehy dia ny ankamaroan’izy ireo dia avy amin’izy ireo pimping ahy ho an’ny namerenana. Izy no mampiasa ahy, heverina ho toy ny mpandika teny, mitarika mba hahazo zazavavy hanambady hihaona mandeha an-tongotra manodidina ny hanome azy ireo ny isa mieritreritra ny isa ireo raha ny marina ho ahy.
Izaho tsy nanana olana mahazo ireo aho dia tena te hanome ahy ny isa ao amin’ny ahy manokana aza. Raha ny tena izy, raha nanomboka niresaka ny sasany zazavavy nihaona any ho any, izy dia matetika mitondra ny finday tsara avy ny tanana an-tsoratra sy ny tenany izany ka wed samy manana samy hafa maro. Tokony ho tsara, izaho mitondra ny datin ny fisotroana tolotry ny fanjakana, trano fandraisam-bahiny teo anoloan’ny latabatra ankizivavy, afovoany fitantanana avy amin’ny orinasa nanao raharaham-barotra, ny oniversite coeds, ny vehivavy izay vao niafara tao amin’ny trano fisakafoanana mitovy.
inona fantatro, Guangzhou dia ny toerana feno vahoaka, grandiloquently
Indrindra fa rehefa mandray ny metro nandritra ny ora firavana ihany koa, dia afaka mihaona isan-karazany ny Sinoa vavy. Tsy azoko antoka inona no tanjona mba hihaona Shinoa ny tovovavy, raha toa ka mila fanampiana, mety afaka miresaka amiko satria aho ankizivavy Shinoa monina ao Guangzhou. Afaka mihaona isan-karazany ny Shinoa tovovavy raha mandeha eny an-dalambe eny na ianao, tsy mila manao na inona na inona mba hahita Shinoa, dia hisy ihany koa ny adala Sinoa vavy avy ny hahita anao mavitrika.
Mangataka ianao maka sary na mampiaraka ho iray-alina hitoetra
Afaka ny Indiana amin’ny tokan-tena-teny Shinoa tanibe Visa hiditra ao Shina ao Guangzhou, dia hiditra ao Hong Kong sy ny farany-hiala an’i Shina ao Guangzhou. Afaka ny Indiana amin’ny tokan-tena-teny Sinoa tanibe Visa hiditra ao Shina ao Guangzhou, dia hiditra ao Hong Kong sy ny farany-hiala an’i Shina ao Guangzhou
← Shinoa Ankizivavy Mampiaraka Toerana ho an'ny Fivoriana ara-Dalàna Sinoa Vavy Tokana Mans Travel